Hevitra mandalo resaky ny mpitsimpona akotry: efa mampiteny ny moana ny tranga feno habibiana mitampim-bava sisa anefa ny mponina | NewsMada
Hevitra mandalo resaky ny mpitsimpona akotry: efa mampiteny ny moana ny tranga feno habibiana mitampim-bava sisa anefa ny mponina
Dia efa ho za-dratsy ve ny olona, sa efa very toky tanteraka ka mionona ao anaty fahanginana? Hany ka na inona na inona fitrangan’ny hetraketraka mitory tsy fanomezam-bidy ny ain’olombelona, toa tsy miteraka ako firy intsony eo amin’ny fiarahamonina. Rà mandriaka mahatsiravina tamin’ny toerana roa samy hafa no taterin’ny filazam-baovao. Ny iray teny Imerintsiatosika, ny faharoa tetsy amin’ny làlambe mankany Iavoloha. Samy nitanondrika daholo teo am-pandrenesana na teo am-pamakiana ny fitrangan’ireo loza roa tonta ireo. Samy mahafantatra fa tsy ny olon-kafa foana no iharan’ny tsy rariny fa ny anjara ratsy dia mitatao eo amin’ny rehetra, ary arakaraky ny tsy fahaizan’ny fanjakana manefa ny adidiny eo amin’ny fiarovana ny olona sy ny fananana no mampitombo ny vitan-dratsin’ny mponina tsirairay hifanena amin’ireo mpanao ratsy.
Sarotra ny fiainana, mitombo an’isa arak’izay ihany koa ireo mpanao ratsy. Tsy ny fisian’ny fahasahiranana akory sanatria no ahafahana manala tsiny amin’ny fanaovan-dratsy, fa ny fisehon’ny fahantrana mianjady amin’ny maro dia mametraka andraikitra ny fitondrana ho tsy mahavita azy. Sady avy eo tsy mbola mahita fomba hiarovana ny fiaraha-monina mba ahafahan’ny olona ho tony anivon’ny fandriampahalemana. Mifandray daholo izany fisehoan-javatra izany. Ary mbola mifandringotra amin’ izany koa ity fanetribe atao hoe kolikoly. Ny fahalotoana noho ny fanatsabahana tànana ao anatin’ny kovetan’ny kolikoly sy fitsikombakombana tsy mendrika samihafa dia mitarika ny tsy fananana fahefana hifehy ny olona ao ambany fifehezan’ny tena ? Ahoana moa no haha to-teny ny tena raha efa fantatry ny besinimaro ny fitsabahan’ny tena amin’izao tetika ratsy izao izay tokony iadidian’ny tena ny fitandroana ny tsy hanaovan’ny hafa izany?
Tonga ity ny fifidianana. Fotoana fohy ahafahan’ny mponina manadihady sy mandinika izay olona afaka homena fitokisana hitondra fanovana eo amin’izany lafin-javatra rehetra izany. Fandinihana mangina fa tsy fibitabitahana an-tsehatra fotsiny no entina hisafidianana mba tsy hanenenana indray avy eo. Ny toe-tsaina entina manatanteraka ny andraikitra eo amin’io sehatra an-tampony io no antoka lehibe amin’ny fifehezana ny fomba fitantanana. Anjaran’ny mpifify tsirairay no mamadibadika an-tsaina ireo tolotra samihafa aroson’ny mpilatsaka. Miisa 36 izy ireo, ampy anaranam-po hisafidianana.